Ihe kpatara oku mbata ji dị oké egwu na njem onye ahịa gị | Martech Zone
M ga-ekweta na m egwu banyere oku na m nnọọ maara na m na-ahapụ ego na tebụl na azụmahịa m. Ekwentị m na-ada ụda ụbọchị niile ma ndị mmadụ anaghị eche nsogbu ịhapụ ozi, ha na-aga n'ihu. Echere m na ha achọghị ịrụ ọrụ na ụlọ ọrụ anaghị anabata ozi na ịza ekwentị bụ ihe na-egosi nke ahụ. Nke ozo bu eziokwu - anyi na anabata ndi ahia anyi. Ọ bụ atụmanya anyị na-etinyekarị n'akụkụ, agbanyeghị. Adịghị mma!
Nke a bụ ihe akaebe:
52% nke ndị na-enweghị ike ịgwa onye dị adị okwu na-ekwu na ọ metụtala mkpebi ha ịzụta.
Ihe omuma ihe omuma a na-enye m ihe omuma ndi ozo nke na-eme ka m banye na ihe ndi ozo anyi choro iji nweta usoro oku oku. DialogTech (nke a na - akpọbu Ifbyphone) chịkọtara data a sitere na isi mmalite dị iche iche na ụlọ ọrụ ahụ - ọ dịkwa mma nyocha!
DialogTech bụru onye ndu akpọjeru nụ nchịkọta na akpaaka maka ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, na ụlọ ọrụ na-eto ngwa ngwa.
Tags: okunjem ndị ahịamkparịta ụkaifbyfoinbound okuoku ekwentị